Steam Boilers, Gasi Boilers, Mvura Inopisa Boiler - Goodao Technology Co, Ltd.
Oiri Gasi Boiler
Thermal Mafuta Boiler
Simba Kudyara Bhaira
Magetsi Steam Boiler
Heat Kudzorera Boiler
Steam & Kupisa Mvura Pipe
Kuiswa & Tekinoroji Service
Kugadzira & Hunhu Kudzora
Makore makumi mashanu 'Bhaira Ekugadzira Chiitiko
Biomass Boiler-Hot Sale- Nyore Kuisirwa Yakadzika Kuchenesa Kukosha Fuel Wood Rice Husk Pellets nezvimwewo Nhanganyaya: Biomass Steam Boiler iri yakatwasuka-kumashure matatu emvura moto pombi inosanganiswa bhaira. Gadzirisa moto chubhu mudhiramu uye yakajeka pombi yemvura madziro akagadzika kurudyi uye kuruboshwe mativi echoto. Nechiedza cheni chegate stoker yekugadzira michina yekudyisa uye neyekunyorwa feni uye blower yemakaniki kufefetedza, ziva zvemagetsi taphole ne scraper slag remover. Iyo hopper yemafuta inodonhedza ku ...
Kaviri Drum Steam Bhaira
Coal Steam Boiler-Inoshandiswa Muzvikafu, Textile, Plywood, Pepa Brewery, Rice Mill nezvimwe .. Nhanganyaya: SZL Series yakaunganidzwa mvura tube boiler inotora refuitudinal yakapetwa mbiri Drum keteni boiler. Iyo Boiler muviri inoumbwa kumusoro & pasi longitudinal zvigubhu uye convection chubhu, yakanakisa kupisa moto wepamusoro, yakakwirira yekushisa kwemagetsi, kurongeka kwakaringana, kompakiti chimiro, kutaridzika kutaridzika, kukwana kwakaringana. Rutivi rweCombustion mukamuri yakarongedza mwenje pombi yemvura madziro chubhu, kumusoro gubhu rinopa chizi ...
Gasi Steam Boiler
Nhanganyaya: WNS dzakateedzana chiutsi bhaira unopisa mafuta kana gasi ndeye Horizontal yemukati kupisa mwoto matatu backhaul moto chubhu bhaira, inotora bhaira vira yakanyorova kumashure mamiriro, yakanyanya tembiricha utsi, gasi shandura yekutsvaira wechipiri uye wechitatu backhaul utsi chubhu ndiro, uye mushure mekamuri yeutsi. rakaburitswa muchadenga kuburikidza nechimbini. Iko kune yekumberi uye kumashure Smokebox Bhokisi mune iyo boiler, iri nyore kugadzirisa. Yakanaka burner inotora kupisa otomatiki reshiyo kuchinjika, feedwater ...
Biomass Wood Thermal Oiri Boiler
Thermal Oiri Boiler inoshandiswa muTextile, Chikafu, Rubha, Pepa, Chipurasitiki, Wood, Zvivakwa nezvimwewo Feature: 1.Zvese zvimiro zvine musoro uye zvakaomarara, zviri nyore kuisa. 2.Advanced design, Complete mamiriro 3. Simple mvura kutenderera, inonzwisisika mamiriro ekudzvinyirira zvikamu, hunovimbisa mvura yemhando, yakachengeteka kumhanya 4. Yakazara Ancillary michina, yepamusoro nzwisisika tekinoroji.
SHX kutenderera Fluidized Bed bhaira
Nhanganyaya: Senge nyowani yemhando yepamusoro yekukwira-yepamusoro neakadzika-kusvibisa akachena akachena tekinoroji. kutenderera fluidized pamubhedha mwenje (CFBC) tekinoroji haina kufanana nevamwe kuti ine yakawanda yakasarudzika maitiro. 1. Kutenderedza mubhedha wakanyoroveswa ndewemoto wakadzika-tembiricha, saka nitrogen oxides inoburitsa bhaira rakadaro rakadzikira zvakanyanya kupfuura iro remarasha-upfu bhaira, uye bhaira rakadaro rinogona kutsemura zvakananga panguva yekupisa. Kutenderera fluidized mubhedha bhaira neakakwira desulfuriza ...
Autoclave uye Boiler
Autoclave-Yakakurumbira inoshandiswa muACC Chirimwa, Flyash chirimwa, Chivakwa Matombo nezvimwe .. Autoclave Feature 1, yekutanga yekugadzirwa kwemukati kweiyo autoclave nyanzvi fekitori. 2, kugadzirwa kwemutsara wekereke, kushandura zvese zvinogadzirisa, mhando uye kugadzikana. 3, zvese zvekumanikidza zvikamu 100% X-ray firimu rekuona, nzira dzekutsvagisa. 4, iyo chigadzirwa sefekitori yese, yepamusoro uye inonzwisisika chimiro, pfupi yekuisa nguva, mutengo wekudyara wakaderera. 5, yakarongedzwa zvizere, negwinyiso kana com ..
Nhanganyaya: Zvekumanikidza ngarava midziyo inoita basa rakakosha mune petrochemical indasitiri, iyo indasitiri yesimba, yekutsvagisa kwesainzi uye zvikamu zvemauto etc. Pressure chombo chombo muviri une cylinder, chisimbiso musoro, flange, zvisimbiso zvinhu, yakavhurika pore uye yakabatana pombi, inobereka. Mukuwedzera, iyo zvakare ine zvishandiso zvekuchengetedza, mita uye kuchengetedza mukati mukati mechinangwa chekuchengetedza. Dzvinyiriro Vessel Main Performance Paramende Chinyorwa Steam Pressure1.0Mpa Inlet Tembiricha 250 ℃ S ...
Nhanganyaya: Kumanikidza Vessel Main Performance Paramende Chinyorwa Steam Pressure1.0Mpa Inlet Yekushisa Tembiricha 250 ℃ Kupisa Mvura Tembiricha 179 ℃ Kupisa Mvura: Inlet Yekushisa 90 ℃ ； Kunze Kunobuditsa Tembiricha 140 ℃ Feature Fully otomatiki mashandiro anogona kuzadzikiswa nedhijitari controller switch Dhizaini yakasarudzika advanced programmable controller. , Heating element input sequence inogona kuona iyo nguva otomatiki switch kuti iwedzere chinhu chehupenyu Neimwewo mvura yedonje Neine otom ...
Nyanzvi Yezvigadzirwa Boiler Mugadziri
Xuzhou Double Rings Machina Co, Ltd ndeyaGoridhe Mwedzi, iyo fekitori yeBoomass boiler, Coal Boiler, Mafuta Gasi Boiler, Thermal Mafuta Boiler, Kutenderera Fluidized Bed, Autoclave, Pressure Vessel, Electric Steam Boiler, Steam & Hot mvura Pipe uye Boiler Accessory .
Yedu Boka inovhara nzvimbo yemamiriyoni 950000 mativi. Kugadzira Chidimbu nzvimbo inosvika mazana mazana mashanu emamirimita. Une iro resevhisi yakazara yeSainzi yekutsvagisa, Kugadzira, Kutengesa uye Kuisa.Advanced Technology uye Yekuongorora Machine kuona kuti chigadzirwa chakanakisa mhando.
ZVIITIKO & CHEMAHARA KESI
Kufambisa kweBoiler uye kurongedza
Kutenderera Fluidized Bed Bhaira （CFB） Kuisirwa --- 45Ton 5.3 Mpa Inotenderera Fluidized Bed Bhaira. Mushure mekupedza gore rese ra 2016 kuzokurukura, iyo 45 T 5.3 Mpa inotenderera Fluidized mubhedha Boiler akasainwa chibvumirano uye apedza kugadzira. Zvino, iyo Circulati ...
1T DZL Chain Grate Steam bhaira yekupedzisa kumisikidza Mushure mekupedza mazuva manomwe, vashandi vekugadza vapedza kuisirwa 1T DZL Chain Grate Steam Boiler ...
Kutengesa uye kutumira kwema boilers
Boiler Shipment --- SZL 10Ton Mvura Tube Coal Yakapera Steam Boiler Ichanunurwa kuIndonesia Mutengi Chivharo Kana iyo Indonesia yatenga yedu yekutanga 6 Ton Steam Boiler, yaive yavo yechipiri boiler yegumi Ton Mvura Tube Coal Fired Steam boiler. Mune hurukuro ine hushamwari, ...
Zvigadzirwa zvinopisa, Sitemap